Tonlọ oriri na ọ Myanmarụ Hilụ Hilton dị na Myanmar na-amalite mmemme "CoffeeBriques"
Home » Nkwari akụ na nkwari akụ » Tonlọ oriri na ọ Myanmarụ Hilụ Hilton dị na Myanmar na-amalite mmemme "CoffeeBriques"
Nwere ike 6, 2019
Tonlọ ọrụ Hilton dị na Myanmar amalitela mmemme na-eme ka kọfị kọfị n'efu ghọọ "kọfịBriques" nke enwere ike iji sie nri na kpo oku. E gosipụtara usoro dị mfe iji mee kọfịBriques na Satọdee mbụ na Hilton Mandalay, nke mbụ na Hilton mbụ na Myanmar ịmalite mmemme ahụ.
Kọfị briques bụ eco-enyi na enyi mmanụ ọkụ ọzọ na icheku icheku. Hilton na-emejuputa mmemme kọfịbrib dị ka akụkụ nke ntinye nkwado ya ogologo oge na Myanmar.
“2019 bụ afọ dị ịrịba ama maka Hilton ka anyị na-eme afọ 100 anyị. Site na mmemme kọfịBriques, anyị na-achọ ime ka ntinye aka anyị na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya maka ọdịmma nke obodo. Site na imegharị ala kọfị eji eme ihe, anyị na-enye ọ bụghị naanị ihe ngwọta ike dị ọcha kamakwa ịbelata mkpofu nke na-aga ebe mkpofu ma ọ bụ ụzọ mmiri mechiri emechi, "ka Oriakụ Veronique Sirault, Onye Isi Nchịkwa nke Hilton na Myanmar kwuru.
Ihe kariri kilogram 140 nke kọfị kọfị a chịkọtara ihe karịrị ọnwa abụọ akpọnwụwo, kpachapụ anya ma kpụzie ya n'ime briquette. A na-eji ndị a eme ihe ọzọ dị ka icheku ọkụ na akụrụngwa Hilton.
A na-ejikarị kọfị kọfị eme ihe iji ghee BBQ. KọfịBriques na-arụ ọrụ nke ọma karịa unyi n'ihi na ha nwere carbon na mmanụ kọfị nke na-emepụta ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke nwere okpomọkụ dị elu karịa unyi. Emere kọfị kọfị na Hilton na nkwado na Diversey.
Na Myanmar, icheku ọkụ na nkụ ka bụ isi ihe na-eme ka isi nri. Site na iwebata mmemme kọfịbri, Hilton nwere olile anya ime ka obodo na ụlọ ọrụ dị iche iche gbaa ume imepụta CoffeeBriques nke ha ma ọ bụ ịchọta mmanụ ndị ọzọ na mmanụ ọkụ gburugburu ebe obibi. Ihe mkpofu kọfị a na-emegharị emegharị na-eme ka ihe ruru pesenti 80 pere mpe karịa ma ọ bụrụ na ihe mgbakwasị ụkwụ na-ejedebe na mkpofu. Usoro nke ime kọfịBriques achọghịkwa ọkụ n'ihi na enwere mmetọ dị obere.
“Mkpochapu osisi bụ ihe na-ebute mgbanwe ihu igwe n’ụwa. Ihe omume a na-enye aka ebelata mkpo oku na nkụ na Mianmaa. Anyị nwere olile anya ị ga - eji nlezianya dube ma kpalie ndị ọrụ anyị na ndị ime obodo ime ihe dị mfe iji chekwaa Earthwa, ”Oriakụ Veronique kwukwara.
Hilton na-arụ ọrụ ugbu a ụlọ nkwari akụ atọ na Myanmar: Hilton Nay Pyi Taw, Hilton Mandalay na Hilton Ngapali Resort & Spa. Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ nkwari akụ atọ na pipeline mmepe nke ga-emeghe na Inle Lake, Bagan na Yangon n'ime afọ ndị na-abịanụ.
Onye ọrụ Qatar na-ahụ maka njem nlegharị anya: 'Enweghị visa maka ndị iro!' Ọchịchị Qatar: 'Ọ bụghị otú ahụ!'
Onye Minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica ga-ekwu okwu na mwepụta nke Caribbean Hotel Investment Conference and Summit Summit